Ubuchwepheshe be-Semalt: I-Google Amamephu NjengeFomu Elisha Lezokukhangisa Komphakathi
Akukona isikhathi esidlule, i-Google Plus yayiyiyona eyinhloko yomhlinzeki wonke ulwazi mayelanaamabhizinisi wendawo. Noma kunjalo, iGoogle Bhizinisi Lami selivele lithola iwebhusayithi kubanikazi bebhizinisi. Abasebenzisi banamuhla bangasebenzisa i-Google Amamephu ukuthi babe nokufanayoukusebenza. Amanye ama-analytics we-SEO abukela i-Google Amamephu njengama-social media ekuguquleni - la roche posay pigmentclar eyes skroutz. Izinkampani eziningi zithathe le ndlela yokwenza umphakathiIzindlela zokumaketha ezokuxhumana ziveza izithelo ku-Google Maps.
I-Google Maps ayiyona iwebhusayithi yezokuxhumana komphakathi kepha inokufana okufanayoamapulatifomu ezokuxhumana nabantu. Amaqhinga wezokuThengiswa koMphakathi woMphakathi (SMM) amaqhinga asebenza ku-Google Maps njengoba nje kumanethiwekhi omphakathi. I-Google Amamephu inayoikhono lokukhulisa amandla akho wokubala.
Umphathi wePhasimende Impumelelo Semalt ,U-Nik Chaykovskiy uchaza izici ezitholakala emabalazweni e-Google, okungaba nomthelela ekwenzeni ukwenziwa kwamaklayenti.
Uhlolojikelele lebhizinisi kumamephu
Wonke amabhizinisi anekhadi, elinolwazi olufana nedatha yendawo, isilinganiso sezinkanyezi,ukubuyekezwa kwamakhasimende, nezithombe ze-firm. Esikhathini esiphezulu, kunesifinyezo sokwaziswa okufana nesithombe sekhava, ukulinganisa kwamanani kuama-dollar, ukulinganisa kwezinkanyezi zomsebenzisi, isigaba sebhizinisi kanye nokuxhumanisa kwesiqondiso sendawo yomzimba. Amabalazwe we-Google anikezela isiteji esifana nesinyeukuze abezindaba bezenhlalo bahlanganise:
Gcina isici. Omunye angasindisa usesho noma isayithi ukuyibuka kamuva.
isici esiseduze. Lolu lwazi mayelana namabhizinisi afanayo kuleso sigaba ngaphakathifinyelela endaweni yamanje yomsebenzisi. I-Google imemezela ukuthi cishe amaphesenti angama-80 kulawa aseshayo avela ezipheqululini zamaselula..Lo mphumelakuqinisa isidingo sokwenza indawo yakho yeselula ibe mnandi.
Thumela efonini yami. Abasebenzisi beselula abane-akhawunti ye-Google bangasebenzisa lesi sici ukuze babelaneisixhumanisi noma indawo yebhizinisi.
Yabelana. Kukhona i-permalink ukusiza abasebenzisi ukuthumela ulwazi lomsebenzisi oluhlukileizindawo. Unganciphisa isixhumanisi usebenzisa ikhodi yefreyimu ye-Google.
Isici senhlalo se-Google Maps
Abasebenzisi bafika ukubona isithombe. Amakhasimende anakho ukwabelana ngezithombe kulesi sigaba.Kukhona indawo eyakhelwe ngokukhethekile ukulinganisa komsebenzisi. Umsebenzisi angalinganisa ibhizinisi noma aze ashiye amazwana. Abasebenzisi bangakha amamephu wamasikolapho bangafaka khona "izindawo" ezizithandayo ezifana namabhizinisi.
Amabhizinisi asekhaya kufanele akhuthaze abasebenzisi ukuthi babukeze amabhizinisi. Abantu bangaphinde balayisheisithombe sabo ukwenza abantu bathole ukuboniswa kwalokho abakulindele. Uma ibhizinisi liba nokubuyekezwa, lapho inkampani izuza ngokwengeziwe kontangaukwabelana ngontanga. Amabhizinisi angakwazi ukulalela lokho amakhasimende abakushoyo futhi enze izinguquko ezidingekayo.
I-Google Amamephu iyisabelo se-Google Plus Local. Ekuqaleni, i-Google igcizelele ukudalainethiwekhi yendawo yezenhlalo yamabhizinisi. Kule nkathi, amamephu we-Google angase abe nesimo esifanayo nezinguquko zamuva ku-Google algorithm.I-Google Maps kungenzeka ukuthi ingabi inethiwekhi yezenhlalo kodwa inezinye izici ezihlobene nokumaketha kwezokuxhumana. Ngokwesibonelo, abasebenzisi bathola ithubakhuthaza amabhizinisi abo nezinsizakalo ngokufaka indawo. Omunye angathuthukisa i-SEO ngokusebenzisa amathegi we-meta futhi akhiwe futhi akhokhelwaizikhangiso ezihlosiwe. I-Google igcizelela kakhulu ngokuphathelene ne-SEO yangakini kanye nokwenza amabhizinisi asezingeni ngokusebenzisa indawo yawo. Googleamamephu angaba nethonya elikhulu ekukhangiseni njengamanye abezindaba.